Advanced Systeam Care - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Advanced Systeam Care
Advanced Systeam Care5လေးကိုသုံးစေခြင်လို့ပါ ၊ဆော့ဝဲလ်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်တင်မပေးနိုင်ပါဘူး၊ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုတ်
ကွန်နက်ရှင်လေးကြောင့် ယူလာတဲ့နေရာကိုပဲလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ ၊အထဲမှာကီးလဲပါပါတယ် ၊ကိုနေမင်းမောင်ဆိုဒ်ကပါ၊ 30.61 Mb
စက်ထဲကိုအင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ၊အောက်ကပုံလိုတွေ့မှာပါ ၊ Fair လို့အဝါလေးနဲ့ပြနေပါတယ်၊ကွန်ပြူ
တာဟာအသင့်တင့်ကောင်းမွန်ကြောင်းပါ ၊ Poor ဆိုရင်တော့ဆိုးဝါးနေတယ်ပေါ့ ၊Good ဆိုရင်တော့ရှင်းလင်းရန်မလိုသေးပါဘူး
ရှင်းမယ်ဆိုရင် Deep Care ဆိုတာကိုပုံထဲကလိုသွားပါ ၊ပြီးရင် Scan Now ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
သူ့အလိုအလျှောက်အားလုံးစစ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘေးက Repair Now ဆိုတာကလစ်ပေးလိုက်ပါ ၊ဒါဆိုပြီးပါပြီ၊
ထို့အပြင်ကွန်ပြူုတာအတွက်မရှိမဖြစ် Tool ပေါင်းများစွာလဲပါဝင်ပါတယ်၊ပါဝင်တဲ့ Tool တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီ Tool တွေကိုအသုံးပြုနည်းတွေကိုလဲအချိန်ရတိုင်းတစ်ခုခြင်းရေးပေးပါအုံးမယ်၊
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ငြိမ်းချမ်း, ငြိမ်းသူ, azp09, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, phyulayswe07, smlat88, whiteman, ZAW KAUNG LAY, zo
ပြန်စာ - ASC5Pro
ASC5မှာပါတယ် Turbo Boost အကြောင်းပါ ၊ Turbo Boost ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ အခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့မသတ်ဆိုင်တဲ့
ဟာတွေကိုပိတ်ပြစ်တာပါ၊ အဲလိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် CPU မှာအလုပ်တွေသက်သာသလို RAM မှာလဲနေရာလွတ်တွေပိုလာပါတယ်
windows ထဲမှာကိုယ့်ဘာာသသွားပိတ်ရင်တော့ရပါတယ် ၊အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့ ၊ပိတ်ပြီးလဲ လိုတဲ့အခါကြရင်လိုက်ဖွင့်ရမယ်၊
Turbo Boost ကတော့အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး ၊ကလစ်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့သူဘာသာပိတ်ပြီး ကလစ်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်တာ
နဲ့သူ့ဘာသာပြန်ဖွင့်ပါတယ်၊ သူ့မှာ ဂိမ်းဆော့ရင်သုံးတဲ့စနစ် Game Mode အလုပ်လုပ်ရာတွင်သုံးတဲ့စနစ် Work Mode ဆိုပြီး
နှစ်မျိုးပါပါတယ်၊ ကျွန်တော်က Game mode ကိုပဲသုံးပါတယ် ၊သူ့ကိုပထမဆုံးသုံးမယ်ဆိုရင် အောက်ကပုံမှာလို Turbo Boost ကို
သွားလိုက်ပါ၊ ပြီးရင်အောက်က Configure ကို ကလစ်ပါ၊
ပြီးရင်အောက်ကပုံမှာလို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Mode ကိုရွေးပါ၊ ပြီးလျှင် Next ကိုကလစ်ပေးပါ၊
ပြီးလျှင်အောက်ကပုံကလိုပိတ်ပေးမှာတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် Next ကိုဆက်ကလစ်သွားလိုက်ပါ
၊နောက်တစ်ဆင့်မှာ windows Themes
တွေကို ပိတ်လိုကပိတ်နိုင်ကြောင်းပြပါမယ် ၊ပိတ်လိုက ချက်ပေးပြီး မပိတ်လိုက Next ကိုပေးလိုက်ပါကသူ့တာဝန်ပြီးပါပြီ
ASC5ကိုပိတ်လိုက်ပါ ၊ CPU နဲ့ RAM တို့သိသိသာသာလျှော့ကြသွားပါလိမ့်မယ် ၊Turbo Boost မှာထွက်လိုပ်ါက
ASC5ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး Turbo Boost အောက်မှRestore Now ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါက အားလုံးပြန်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အောင်ဗလ, ငြိမ်းချမ်း, ငြိမ်းသူ, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, tu tu, whiteman, ZAW KAUNG LAY, zo
program များစွာကွန်ပြူတာထဲထည့်သွင်းထားခြင်းဟာလဲ ကွန်ပြူတာကိုလေးလံစေပါတယ် ၊တစ်ကယ်အသုံးလိုတဲ့ program ကိုသာ
တင်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ ၊program တွေကို ဖြတ်ထုတ်ဖို့ windows မှာ remove program tool ပါပါတယ် ၊
ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိပါဘူး ၊အကုန်ဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး ၊ အခမဲ့ ရက် ၃၀ သုံးခွင့်ပြုတဲ့ program ဆိုပါစို့ ၊ရက်ပြည့်ရင်
သုံးမရရင်ပြန်ဖြတ်ပြီးတင်လို့မရတော့ပါဘူး ၊ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အထဲမှာကျန်နေတဲ့ဖိုင်တွေကြောင့်ပါပဲ ၊
ASC5 မှာပါတဲ့ uninstaller ကတော့ အားလုံးကိုဖြတ်နိုင်ပါတယ် ၊ program တစ်ခုဖြတ်ခြင်တယ် ASC5ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
tool box ကိုသွား Clean မှ Iobit uninstalle ကိုရွှေးလိုက်ပါ မိမိစက်မှာထဲ့ထားတဲ့ pro အားလုံးကို ပြပေးပါမယ်
ဖြတ်ခြင်တဲ့ program ကို ကလစ်လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး အပေါ်က uninstall ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ ဖြတ်ထုတ်သွားပါမယ်
ပြီးတဲ့အခါ လက်ကျန်ဖိုင်များကို ရှင်းဖို့ powerful scan ကိုကလစ်ပါ
လက်ကျန်ဖိုင်ကိုတွေ့ရပါမယ် ၊ select All ကိုပေးပြီး ဟိုဘက်က Delete ကိုပေးလိုက်ပါ အားလုံးရှင်းသွားပါပြီ၊
မျိုးဟန်ထက်, ကောင်းကင်ပြာလေး, ငြိမ်းချမ်း, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, smlat88, tu tu, whiteman, zo
ပြန်စာ - Advanced Systeam Care
ကွန်ပြူတာလေးလံခြင်းအကြောင်းမှာအဓိကပါဝင်တဲ့ HDD ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ smart Defrarg ကိုလဲတစ်လတစ်ခါအသုံးပြုရပါမယ်
ဘာဖြစ်လို့သုံးရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လိုခြင်တာရှိရင် HDD မှာ သိမ်းထားတယ် ၊မလိုခြင်ရင်ဖြတ်တယ် ၊ အဲဒီလိုဖြတ်လိုက်
သ်ိမ်းလိုက်လုပ်တော့ သက်ဆိုင်ရာ File တွေဟာ သူ့ Track နဲ့အတုရှိမနေတော့ပဲ ဟိုနား နဲနဲ ဒီနားနဲနဲရောက်ကုန်ပါတယ်၊
ကိုယ်ကလိုခြင်တာတစ်ခုကို ခေါ်ယူအသုံးပြုတဲ့အခါ CPU ဟာ HDD မှာ ဟိုနေရာလိုက်ကောက် ဒီနေရာလိုက်ကောက်နဲ့ RAM ပေါ်
ဆွဲတင်ရပါတယ်၊အဲဒီမှာ ကွန်ပြူတာ လေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တော့တာပဲ ၊နေ့စဉ်အသုံးပြုသူအနေနဲ့ မဖြစ်မနေ disk defrag တစ်လတစ်ခါ
ASC5ကိုဖွင့်ပါ ၊ Tool Box ကိုသွား ၊ Smart Defrag ကိုယူလိုက်ပါ ၊
Mb အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ smart Defrarg ကိုထပ်မံ Download
လုပ်ရမှာပါ ၊ပြီးမှဒီထဲမှာပေါင်းထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ၊ဖွင့်လိုက်ရင်အောက်ကနမှုနာပုံလိုတက်လာပါမယ်
အပေါ်က Volume ဆိုတာက HDD မှာနှစ်ပိုင်းခွဲထားတဲ့အတွက် နှစ်ပိုင်းပြပါတယ်
အမှစ်ခြစ်လေးတွေပေးလိုက်ပါ ၊ ပြီးရင် အောက်က Defrag ကိုကလစ်ပါ စတင်လုပ်ပါတယ်၊ disk defrag လုပ်တာအလွန်အချိန်ကုန်တဲ့
အလုပ်ပါ ၊ ဒါကြောင့် ဒီtool ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် Shut down after defragmentation ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်လေးပေးပါ
ပြီးရင် မော်နီတာကိုပိတ် ၊ သွားခြင်ရာသွားတော့ သူ့အလုပ်ပြီးရင် သူ့အလိုလျှောက် ကွန်ပြူတာကို ပိတ်ပေးမှာဖြစိပါတယ် ၊
မောင်ပေါ်ဦး, arkaraung, bagothar85, smlat88, tu tu, whiteman, ZAW KAUNG LAY, zo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ....နောက်လဲ ထပ်ပီး နည်းပညာ လေးတွေ ဝေငှ ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.....ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇော်ဝေအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇော်ဝေအောင်
ASC5 မှာပါတဲ့ မိမိကွန်ပြူတာထဲမှာရှိတဲ့ ဘာမှမရှိသော Folder အလွတ်များကိုဖြတ်ပေးတဲ့ Tool လေးပါ ၊
အသုံးပြုရန် ASC5မှ Tool Box ကိုသွားပါ Control မှ Empty Folder Scanner ကိုယူလိုက်ပါ ၊
ံHDD မှာ ကိုယ်ပိုင်းသလိုပြပါမယ် အမှန်ခြစ်လေးတွေပေးလိုက်ပါ ၊ ပြီးလျှင်အောက်မှ Scan ကို နိုပ်ပါ၊
တွေ့ရှိသော Folder အလွတ်များကိုပြပါမယ် အပေါ်ဆုံးက Folder Name ကိုအမှန်ခြစ်လေးပေးလိုက်ပါ ၊ ပြီးလျှင် အပေါ်က
Delete ကို နိုပ်လိုက်ပါ ၊ အားလုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကျော်တိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးတိန်, arkaraung, whiteman, zo
ဒီဆော့ဝဲလ်ကို 3.0 ကတည်းက သုံးဖူးတာဗျာ။ တော်တော်လေး ကောင်းတယ်။ အခုလဲ 5.2.0 အသစ်လေးရလို့ အားလုံး သုံးလို့ရအောင် Share လိုက်ပါတယ်။ Key file ပါထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလို့မရရင် ပြန်ပြောပေးကြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်တိုး, အောင်ဗလ, g00gle, james249, tu tu, whiteman, zo
Advanced SystemCare with Antivirus 2013 V5.5 Full လိုအပ်သူများယူပါ.. ပါတီပါချက် virus ပါသက်တယ်
စကားးဝှက် ...... koskomputer
Last edited by kyawminkhoung; 16-09-2012 at 05:49 PM..
ကျော်တိုး, ZAW KAUNG LAY, zo
ပို့စ်5ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်တော့ Advanced System Care ကို တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ် စစထွက်ချင်းကတည်းက သုံးဖူးတယ်။
Computer Beginners တွေအတွက် အဆင်ပြေမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။
စက်ကိုလည်း ပေါ့ထွက်သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်
[CENTER]King of Death[/CENTER]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ လရောင်မြူမှုန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by လရောင်မြူမှုန်
ကွန်ပျူတာကို သွက်လက်မြန်ဆန်လာစေဖို့ASC latest version 2013အရင်5. .0 Version ကနေအခု6.0ထွက်လာပါပြီအရင်ထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေလာပါ
Virus တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးဖို့အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဘာကြောင့်
လေးနေတာလဲလို့ သိချင်ရင်ဒီဆော့ဝဲလေးနဲ့ စစ်ကြည့်အဖြေသိလာလိမ့်မယ်...။
နေစဉ် သုံပီးတိုင်း အိပ်ခါနီးတိုင်း ရှင်းပေးလို့ ရတယ် ။ စောင့်နေစရာမလိုပါဘူး
ရှင်းပီးရင် Auto shutdown လုပ်ပေးထားဖို့ ပါလာတယ် ။
Setting ကို နှိပ်လိုက် အထဲရောက်ရင် Auto Clean ကိုရွေးပီးရင်
Automatically Sweep ဆိုတာ အမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့ Key ဖြည့်
အောက်နားမှာ Key ဖြည့်စရာ အကွက်လေးပါလာပါလိမ့်မယ်
Text file ထဲက ကီးကို ဖြည့်လိုက် ။ အဲ့ဆိုရင် Full version ဖြစ်ပါပြီ...
Credit to -->> http://www.zwmnna.com/2013/02/asc-latest-version.html
တစ်လက်စထဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် CC cleaner
ဒီဆော့ဝဲကတော့free သုံးနေတာထက်ဒီဟာလေကိုယူသုံးကြည်လိုက်ပါ။freeထက်ပိုသာလာတဲ့ Registered ဖြစ်ပြီးသာ pro version ဖြစ်ပြီး 64 bit and 32 bit ရောအစင်ပြေပါတယ်။ ကီးမလိုပဲ
အပြည့်အ၀ သုံးလို့ ရပါတယ်။Registered Version မလို့Free
မဟုတ်တော့ပဲ Advanced Setting ကို ၀င်သုံးလို့ ရပါလိမ့်မယ် ။ စက်ကို သန့် ရှင်းဖို့ 
Registery ကို ရှင်းဖို့အဆင်ပြေတယ် စက် လေးသူများ ယူသုံးကြည့်လိုက်ပါ.......။
အင်တာနက်လိုင်းကို ခဏ ပိတ်ထားပါ လိုင်းမချိတ်ပါနဲ့ 
ဆော့ဝဲကို အင်စတောလုပ်ပါ ပြီးလျှင် ဆော့ဝဲကို ပိတ်ထားပါ
Dell ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို ကော်ပီယူပြီး Program ထဲက Ccleaner folder ထဲ ချပါ
ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လို့ ရပါပြီ ကီးတောင်းလျှင် key ဖိုင်ထဲက ယူထည့်ပါ
Last edited by မိုးတိန်; 06-04-2013 at 09:48 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မိုးတိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
fileကexpire ဖြစ်သွားပြီတဲ့အစ်ကိုရေ တခြားဟာမရှိတော့ဘူးလားဟင် လိုချင်လို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကောင်းကင်ပြာ@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကောင်းကင်ပြာ@gmail.com
ဒါကတော့ advance system care6ပါ ။ အထဲမာ serial key ပါလာပါတယ်။ အဆင်မပြေခဲ့၇င်တော့ တချက်ပြန်ပြောပေးပါ။ကျနေ်ာစမ်းတာတော့ အဆင်ပြေလို. ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
advance system care in mediafire
ဒီဟာကတော့ Ccleaner pro version ပါ။
ccleaner in mediafire
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကောင်းကင်ပြာ@gmail.com, bonge, myonwe, Phoekwarlay, PyaitSone, tu tu, ZAW KAUNG LAY
smadv ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အဲဒီဆော့ဝဲက shortcut virus ပါသတ်နိုင်တယ်ဗျ
တခြား virus cleaner ကောင်းရှိရင်လဲတင်ပေးပါဦး
mobile download ဆိုတော့သိပ်ကြီးရင်အဆင်မပြေလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ZAW KAUNG LAY အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-02-2016, 04:51 AM
SMADV ကို mediafire ကနေ တင်ကြည့်ထားတယ်အကို..
tu tu, ZAW KAUNG LAY
Computer Hardware Advanced ကိုစံငြိမ်း Hardware များဆိုင်ရာ 19 03-08-2011 05:31 PM
Advanced Audio Recorder v6.0.1 lehonchan Applications002-07-2008 08:03 AM
Advanced Microsoft Visual Basic60 2nd Edition kothu E-books များ019-05-2008 05:08 AM
Advanced CORBA Programming with C++ kothu E-books များ017-05-2008 10:30 PM